Dib u eegista Kasamba | Akhrinta maskaxda ee internetka
Akhrinta maskaxda internetka > Dib u eegida Kasamba
Waxyaabaha muhiimka ah ee Kasamba
Waxay bixisaa adeegyo naadir ah sida Kabbalah, I Ching, aura akhriska, iyo xitaa cilmi-nafsiga xayawaanka
Qiimaha qiimuhu wuxuu u bilaabmayaa sida ugu hooseeya $ 1.99 daqiiqaddii loogu talagalay taliyeyaasha qaar
The Kasamba blogku wuxuu leeyahay waxyaabo ay qoraan nafsiyadoodu si ay u bartaan si ka wanaagsan
Dalabka hordhaca ah ee 50% ee maqnaanshahaaga maskaxdaada ugu horeysa
Waxay bixisaa lacag celin haddii lagu codsado saacadaha 72 ee la-talin cilmi-nafsi ah haddii aadan ku qanacsaneyn
Qormooyin iyo dib u eegis ku saabsan cilmi-nafsiga si ay kaaga caawiso inaad doorato mid ka mid ah akhriska
Waxay bixisaa adeegyo gaar ah marar badan laga helo bogagga kale ee akhrinta maskaxda, sida cilmi-baarista xayawaanka, akhriska, iyo qorista
Qiimaha qiimaha badan, oo leh sicirrada ka hooseeya $ 1.99 daqiiqad kasta
Kasamba wuxuu u shaqeeyaa barxad loogu talagalay akhristayaasha madaxa banaan ee madaxa banaan, iyada oo aan la hirgelin nidaamka
Qaar ka mid ah akhristayaasha cilmu-nafsiga ee maskaxdu waxay sare u kacaan ilaa $ 19.99 daqiiqadii
Seddexda daqiiqo ee kobaca bilaashka ah ayaa aad u gaaban si loo helo dareen sax ah oo ku saabsan maskaxda ama adeegga
Kasamba wuxuu bixiyaa barxad loogu talagalay cilmu-nafsiga madaxbannaan, sidaas darteed ma jiro nidaam baaritaan. Xaqiiqdii, waxay ku qaadaan lacag maskaxeed si ay ugu biiraan. Iyada oo goobaha akhrinta maskaxda ee sidan oo kale ah, si taxadar leh dib u eegida jawaab-celinta iyo dhererka waqtiga ee ka shaqeynaya Kasamba Waxaa laga yaabaa inaad nasiib ku yeelatid kuwa cusub, dhakhaatiirta raqiis ah, laakiin waa halis halis ah. Marka la barbardhigo qaar ka mid ah boggaga kale, kuwaas oo leh sharciyo adag oo adag, tani waa xaqiiqo weyn.
Doorashada Miisaaniyad Is-aamin ah oo sax ah
Qalabka raadintooda ayaa raadin kara cilmi-nafsi ahaan qiimeynta iyo qiimaha, laakiin leh cilmi-nafsi aad u farabadan oo leh shirkaddan, waxa laga yaabaa in ay xoogaa aad u xoog badan samayso doorasho. Kasamba ayaa barafoobey oo ku daray isku-darka maskaxda cusub, sidaa daraadeed waxaan rajeyneynaa in habka taranka dabiiciga ahi uu ka dhaco meel ka baxsan qaar ka mid ah la-taliyeyaasha maskaxda ee daciifka ah.
Kasamba waxay si qotodheer u samaysay boggeeda si aad si deg deg ah u hesho degaanka aad rabto inaad eegto. Tusaale ahaan, haddii aad rabto "jacaylka jacaylka" waxaad dooran kartaa mid ka mid ah kuwa ku takhasusay furriinka, shukaansiga, ama xataa gaalnimo. Waa hab sahlan oo lagu jajabiyo raadintaada.
Heerarka akhristayaasha nafsiyaadka waxay bilaabaan $ 1.99 daqiiqad kasta, waxayna u ordi karaan $ 19.99 daqiiqad kasta. Kasamba waxay bixisaa saddex daqiiqadood oo bilaash ah, laakiin waad fiicnaan laheyd inaad ku qabato dallacaad wanaagsan, maadaama aad yar tahay inaad akhriso bilawga saddexda daqiiqo. Tusaale ahaan, waxay u badan tahay inay qaadato daqiiqad (ama ka badan) oo kaliya si aad u ogaato nooca hanuuninta aad raadinayso, shaashadda kaadhadhka, iyo inaad iyaga wax ka qabato. Hubi inaad hesho dhiirrigelinta meesha aad si dhab ah u heli karto inaad ogaato adeegga heer macquul ah. Nooc kasta oo akhris ah iyo mid kasta oo maskaxiyan ah ayaa lagu qiimeeynayaa si kala duwan, sidaas darteed. waxaad ku xiran kartaa baqshadda ama faahfaahinta kaarkaaga, waxaadna ku soo dallacaysaa sida aad u isticmaasho.
Kasamba waxay leeyihiin ikhtiyaarro isgaarsiineed oo heer sare ah. In kasta oo qaababka isgaadhsiintu u kala duwan yihiin doorbidista maskaxda, waxaad ka heli doontaa noocyo kala duwan oo taleefan ah, sheekeysi, iyo ikhtiyaarro iimayl ah oo la heli karo. Micnaha waxaad dooran kartaa sida aad doorbideyso inaad hesho aqrintaada.
Haddii aadan ku faraxsaneyn akhriska maskaxda, u soo gudbi codsi lacag celin ah saacadaha 72 ilaa dhamaadka aqrinta. Tani waxaad sameeyneysaa adiga oo buuxiya "tigidh taakuleyn" xaruntooda xallinta. Codsiyada oo dhan waxay ku xiran yihiin Kiisambar, laakiin ma cadda inta uu qaadanayo.
Iyada oo aad u tiro badan oo cilmi nafsi ah oo bixiya takhasusyo kala duwan iyo qiime kala duwan, waxaad ku qasban tahay inaad hesho qof ku habboon miisaaniyaddaada iyo baahiyahaaga. Kasamba waxay bixisaa qaar ka mid ah naadiyada aan caadiga ahayn, haddana waxay noqotay mid ka mid ah adeegyadii ugu fiicnaa ee maskaxda ee adduunka, iyaga oo diiradda saaraaya in maskaxdu ay si madaxbannaan u dhigaan heerkooda iyo inay ganacsi madax bannaani ka helaan taageerada shirkad weyn.